AKHRISO-Madasha xisbiyada qaran oo walaac ka muujisay RW la’aanta dalka 3 qodobna hordhigtay Farmaajo.
September 15, 2020 Xuseen 3
Madasha Xisbiyada qaran oo fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa soo saartay war-murtiyeed la xiriira xaaladda siyaasadeed ee wadanka, waxeyna si weyn dhaliil ugu soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajao.
Madasha Xisbiyada Qaran waxey madaxweyne Farmaajo ku eedeyeen ku tumasho dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka, cuuryaaminta shaqooyinka Baarlamaanka, sidoo kalana uu meesha ka saaray xukuumadii shaqeyneysay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu mas’uul ka yahay jaah wareerka siyaasadeed ee kajira Soomaaliya, magacaabis la’aanta ra’iisul wasaaraha iyo khilaafka maamul goboleedyada dalka.
Ugu dambayn madasha ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hordhigtay saddex qodob oo ay doonayso inuu u fuliyo sida ugu dhaqsaha badan.
Jirjirrooleyaashii baa marba midabkooda war la inooga dhigayaa, Allaah Kariim! Midabkoo waa Dammul Jadiid, kan kale waa HAG, ka dib waa midabka mucaaradka, deeto waa midabka madasha xisbayada qaran, ka gadaal na waa midabka maleeshiyo beeleednimo, ugu dambeyn na midabka argiggixiso. Hadba dareenka dalka ka jira ayaa la isu ekeysiinayaa. Dad aan idin aqoon u jirjirrooleeya, annaga se maya.
Mowduuca iiga muhiimsan ee aan boggan maanta u soo galay ayaa ah in aan labo arrimood halkan ku kala caddeeyo, kuwaas oo akhristeyaasha badankooda iskaga qaldama sida aan marar iyo meelo badan ka dheehday; waa na lahjadaha iyo erayada qalaad iyo farqiga weyn u dhexeeya. Caalamka oo idil, luqaduhu erayada way kala amaahdaan oo wayna isku dhex milmaan, sabab kasta oo kalliftay ba. Waxaan nalka ku qabanayaa erayada qaarkood oo Afsoomaaliga ku jira laakiin se uu asalkoodu yahay Afka Oromada (Hiinraac, hadda ayaad “rakaha” sidiisa uu boodboodAYDAA ee is yara xeji).
Erayadaas waxaa ka koow ah ‘badhaadh’. Waa eray Soomaalida min Puntland ilaa Koonfurtu ay si qaldan ugu dhawaaqaan ‘baraar’ laakiin se Soomaalida Woqooyiga (Jabuuti waa Woqooyi) iyo Galbeedka ay nadqigiisa saxda ah ugu dhawaaqaan. Khubarada luqawiga ahi waxay meelmariyeen xeer qeexaya in erayada xaqooda la siiyo oo kuwa luqado kale kaa soo gala sida ay dadka iska lihii ugu dhawaaqaan loogu dhawaaqo. ‘Badhaadh’ Ormoadu sidan uu qoran yahay ee ‘DH’-da ah ayay ugu dhawaaqaan – ‘baraar’ waa qalad.
Waxaan ku khatimayaa in erayga uu oday Hiinraac adeegsado ee ‘rakaha’ yahay Af Oromo oo asalkiisa laga dhex arki karo. Waxaa iyana ka mid ah ‘addooy (adoowe)’ oo uu xididkiisu yahay ‘aadda’ (walaal Af Oromada) iyo ‘jaalle’. ‘Jaalle’ waa magac dhiggeed oo ay isu adeegsadaan waranleeyda Oromada oo asalkiisu waa ‘Jaal’, dad isku fac ah ayaa na isu adeegsada. Haddaba, dadka ruuxa ‘badhaadhe’ qora markii ba u fasirta in uu “reer Woqooyi isqarinaya” yahay iyaga ayaa xeerarka luqadaha iyo lahjadaha ku xeeran aad uga jaahilsan oo in uu wax ka soo barto u baahan.
Nadqiga erayada iyo lahjaduhu isku baab ma aha ee kala garta oo kala saara.
Xaarmaajo hawiye naaso buu u yeeley waa la yaaban yahay.. Mise sixir buu ku burburiyey awoodii hawiye aannnu ogeyn..
War ninkaan ha iska qabto hawiye iyo kablalax wuu ku tuntey waxaa u haray iidoor oo qorshaha ugu jira in uu ka takhaluso markuu soo laabto.